Inkakha iphonsela uMpontshane inselelo yokubhukula
UNOZINTI we-Orlando Pirates uSiyabonga Mpontshane uphonselwe inselelo yokulwela ijezi njengoba eseseminyakeni yokuvuthwa ngokuphelele konozinti kulo mkhakha Isithombe: BACKPAGEPIX
Sibusiso Mdlalose | October 11, 2021
INKAKHA nomqeqeshi wonozinti, uSipho “King Uncrowned” Zimba, iphonsela inselelo unozinti we-Orlando Pirates, uSiyabonga Mpontshane, ngokuthi azibambe ziqine asebenzise ithuba alitholile njengamanje ngoba ungunozinti osezingeni eliphezulu.
UZimba, owazakhela igama ngeminyaka yo-1980 esavimba emaqenjini okubalwa kuwo iDurban Bush Bucks, AmaZulu ne-African Wanderers, usho kanjena nje uMpontshane obesewukudla kwebhentshi kwiPirates usebe sezintini zaleli qembu imidlalo emine yeDStv Premiership ngale sizini, ilandelana emuva kokulimala kukaRichard Ofori.
U-Ofori, odabuka eGhana nothathwa njengonozinti wokuqina kwiPirates, ulimale eseqenjini lakhe lesizwe ngenkathi libhekene neBafana Bafana emdlalweni wokuhlungela iNdebe yoMhlaba obudlalelwa eGoli, ekuqaleni kukaSepthemba.
“UMpontshane ungunozinti onekhono noseqophelweni eliphezulu, kuphela nje okufanele akwenze ukuthi ayeke ukuzithambisa abhukule asebenze ngokuzikhandla, azibambe ziqine ekulweleni ijezi.
Sesiside manje isikhathi ekwiPirates, sesifikile isikhathi sokuthi akhombise ithimba labaqeqeshi ukuthi kumfanele ngempela ukuba ngunozinti iqembu elingathembela kuye,” kusho uZimba.
Eqhuba inkulumo yakhe uthe: “Zehlukene izinhlobo zonozinti ebholeni. UMpontshane uyilolu hlobo lukanozinti okwazi ukulindela ibhola emapalini ngaphandle kokudayiva (ukuntweza) kungenasidingo, futhi okwaziyo ukulidlala ibhola uma lisezinyaweni zakhe, aliqale emuva aliphasele ozakwabo basemuva, hhayi ukulibhamuza nje kuphela.”
Enaba nokuchaza ngoMpontshane uthe: “Ngaleyo ndlela-ke ngimbona esethubeni elingcono njengamanje kwiPirates ngoba onozinti abanga nabo ijezi bona ababahle kahle kulokhu yena akwazi ukukwenza.”
Uthe ngakho-ke, leli yithuba okufanele alisebenzise ngempela alibambe ngazo zombili ngoba unakho konke okudingekayo kunozinti wesimanje kuphela nje akabe nenhliziyo yebhubesi alilwele ijezi, akwenze kube nzima kunozinti osebhentshini ukumphuca ijezi.
“IPirates iqembu elikhulu elinomlando, ngakho kufanele asebenzele ukushiya umsizilo wokubalwa nabanye onozinti abaseqophelweni eliphezulu abake balivimbela. Kanti-ke futhi kule minyaka akuyona yobudala njengamanje, yisikhathi sokuthi adlale ngempela ngoba le minyaka akuyona yiyo kanye yokuvuthwa uma ungunozinti,” kuqhuba uZimba.
UMpontshane (35), odabuka eNgwavuma, wasayiniswa eZimnyama maphakathi nesizini ka-2014/2015 esuka kwiPlatinum Stars ethwelwe ngeqoma njengowayezovala isikhala sikaSenzo “Nzori” Meyiwa owashona ngokudutshulwa ngo-Okthoba 2014.
Njengamanje uMpontshane ijezi ulibanga noSandilands, njengoba u-Ofori esalulama.
UMpontshane kulindeleke akhombise amava akhe emdlalweni eZimyama ezizotholana phezulu neDiables Noirs yaseCongo, emdlalweni weCaf Confederation Cup eStade Alphonse Massamba-Debat, eBrazzavile, ngoLwesihlanu, ngo-6.30 ntambama.